7 Zvidzidzo Zvakadzidziswa Mukusimudzira Kunyora Kwako | Martech Zone
Svondo, Gunyana 25, 2011 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Isu takafara kunyorera Jo-Anne Vandermeulen pa Kushambadzira Tech blog blog radio asi maminetsi angangoita makumi maviri mukati, yedu yeInternet kuwana yakadzika uye isu taifanira kurega kuratidzwa. Zvaive zvichishungurudza sezvo isu tanga tichinyatso kuwana rairo huru kubva kuna Jo-Anne.
Jo-Anne inyanzvi yekushambadzira yekusimudzira. Mushure mekurega basa semudzidzisi, akanyorwa akateedzana emabhuku… uye mukuita izvi akadzidza kugona kugona kusimudzira kwezvinyorwa zvake. Iye zvino akatsaurira bhizinesi rake, iye Blog, imwe neimwe Podcast, uye rake idzva bhuku kubatsira vanyori kusimudzira kunyora kwavo.
Ndinoshuva kuti dai ndakasangana naJo-Anne makore mashoma apfuura… ndisati ndanyora Corporate Kubhuroka kweDummies. Hazvireve kuti bhuku racho harisi kugara richitengesa zvakanaka - ndezvekuti handitende kuti ndakaita zvese zvandaigona nguva yekusimudzira bhuku. Pamwe chete nezvakataurwa naJo-Anne, ndaisa runyorwa urwu rwezvidzidzo pamwechete.
Kunyangwe iwe urikudhinda wega, kuenda nekambani diki yekutsikisa, kana kutsika kutsika… iwe uchave nebasa rekushambadzira iwe pachako uye mabhuku ako. Iwe unokwanisa kuzviita iwe pachako, kunyangwe iwe usina degree rekushambadzira kana uchida kutsvaka nyanzvi mushambadzi, ASI, zvinotora nguva nesimba - neruzivo.
Kutanga blog chinhu chinodiwa. Zvipe pachezvako chaizvo senge nyanzvi, govera zvakakosha zvemukati izvo vatariri vako zvavanogona kutora, uye nekupa uye kupa zvimwezve. Iva wechokwadi, unogamuchira kudyidzana nevateereri vako. Uye zvechokwadi - usakanganwa kuisa kufona kuti zviitwe padivi rebhuku rako (ma) nebhatani rakajeka rekutenga uye zvinoshanda zvinongedzo!
Kuva nehupo mumasocial media ipombi yakakosha kuti uwane kukurumbira kukuru (tiri kutaura mitezo inoita 1.2 Mabhiriyoni paFacebook chete panosvika gore ra2012. Icho chinhu chinogutsa zvakawanda ipapo unozombofungidzira zvekubatana panguva yekusaina kwebhuku). Target vateereri vako, gadzirira kuzviita iwe (uye mabhuku ako) aonekwe mumazhinji network sezvinobvira, uye shandisa nguva kugadzira hukama hunozopedzisira hwazarura musuwo kumikana yakawanda yakawanda.
Kukwidziridzwa kwebhuku rako kunotanga zuva raunenge uine zano rebhuku! Kuvaka kutarisira nevateereri vako kwakakosha. Vanhu vakawandisa (kusanganisira isu) mirira kusvikira bhuku raenda kunodhinda vasati vasimudzira. Takarasikirwa nenguva yakawanda uye kumhanya pane ino! Ndinoshuva dai tingadai takasundira pre-maodha uye tanga tine saiti kumusoro nekukurumidza.
Semutauri, vamwe vangu vatauri vakawedzera kutengesa mabhuku uye vakagovera mamwe akawanda mabhuku na kukumbira mabiko ekutenga mabhuku kune vaipinda pane kubhadhara mari yekutaura. Iyi ipfungwa yakanaka nekuti inoshanda pamatanho matatu… ichikusanganisa nebhuku, kutengesa mamwe mabhuku, uye kuva nevateereri vevaverengi vanobuda vachitaura nezvebhuku iri. Kukunda, kukunda, kukunda!
Ongororo dzinokosha! Tumira makopi ebhuku racho kune vamwe vane masimba muindastiri yako uye Kumbira mhinduro yavo yakatendeseka uye ongororo paAmazon nedzimwe nzvimbo dzekuongorora mabhuku. Ivo vane masimba vane mablog vanowanzo nyora mablog mablog nezve rako bhuku uye vanokubatsira iwe kuti urisimudzire.
Kurudzira vaverengi vako! Yedu bhuku, isu taive nayo mavhidhiyo kubva kuSouth Africa kusvika pa mufananidzo kubva kuBay's Blogger, Richard Brewer-Hay, vhiki rapera! Vaverengi vako vanoda kuve nehukama hwepamoyo newe semunyori - saka ive shuwa kutora mukana uye kuvaka hukama ihwohwo kana mikana ikamuka!
Ive neshuwa yekutora kopi yebhuku idzva raJo-Anne, maPrimiyamu Ekusimudzira Matipi eVanyori.
Sep 25, 2011 na10: 28 PM
Nhamba yechishanu inonzwisisika kwandiri - maita basa. Ndingadai ndisina kumbofunga nezvazvo ndega.